JINGYE Colloidal Mọrịa na-mejupụta egweri isi akụkụ, isi nnyefe akụkụ, moto pụrụ iche n'akụkụ atọ.
Workingkpụrụ ọrụ nke ụlọ ọrụ colloid na-akpacha ajị anụ na nnukwu ọsọ na-akpali akpali. Rgwe ọka na-adabere na mmegharị nke akụkụ abụọ nke ezé, otu n'ime ha na-agbagharị ọsọ ọsọ na nke ọzọ na-anọ ọdụ, nke mere na ihe na-agafe na ezé ezé na-etinye nnukwu ike ịkwa ụda na ike esemokwu. N'otu oge ahụ, n'okpuru ọrụ nke ikike dị mgbagwoju anya dị ka ịma jijiji na nnukwu ọsọ ọsọ, enwere ike ịgbasa ihe ahụ n'ụzọ dị irè, emulsified, anuahade na homogenized.
JINGYE Colloidal Mill bụ ụdị akụrụngwa maka ezigbo egweri mmiri na ọkara mmiri ihe.
1. industrylọ ọrụ nri: ahụekere, sesame, ice cream, cream, jam, ihe ọ juiceụ fruitụ mkpụrụ osisi, soybean, soy sauce, agwa bean, mmiri araekere, mmiri ara ehi protein, mmiri ara ehi soy, ngwaahịa mmiri ara ehi, wdg.
2. Ihe eji eme ubochi: ntacha eze, nchacha ihe, ncha ntutu, ịkpụcha akpụkpọ ụkwụ, ihe ịchọ mma, ịsa ahụ, ncha, bọlsọ, wdg.
3. Chemical ụlọ ọrụ: agba, pigments, e ji esiji ákwà, coatings, mmanu mmanu, griiz, mmanụ dizel, mmanụ ala catalyst, emulsified korota, adhesives, detergents, plastics, iko fiber mesikwuru plastic, akpụkpọ anụ, emulsification, wdg
1.Model: JYJML usoro, vetikal ụdị; JYJMF, ụdị nkewa;
4.Capacity: 0.01-1t / h;
5.Mixing ọsọ: 2800rpm;
6. Ọrụ: emulsification, dispersion, homogenization & ndinuak;
1. Igwe ahụ na-ejide ihe igwe anaghị agba nchara, n'usoro na ọkọlọtọ GMP, iji hụ na nchekwa nri na ahụike.
2.Stable arụ ọrụ arụmọrụ, ezi okpomọkụ dissip, nwere ike ịbụ ezi egweri, iji hụ na fineness nke ngwaahịa izute chọrọ.
3.The ngwaahịa imewe mara mma, na ime ihe dị mfe, ihicha dị mfe, na-emepụta elu mmepụta arụmọrụ maka ndị ahịa.
Nhazi fineness (um)
Nke gara aga: Fryer